Ingqondo yomdatshi waseDutch iswele phantsi: unobuthakathaka kwaye unqabile: uMartin Vrijland
Ingqondo yomdatshi waseDutch iswele phantsi: inobuthakathaka kwaye ingenzi
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	2 Julayi 2019	• 11 Comments
Ukuba isihloko salo nqaku siye sakhuthaza ukuba ufunde umxholo, oko akuthethi ukuba wena ubuthathaka kwaye ungenzi. Kusenokwenzeka nokuba uvumelana nesihloko okanye ufuna ukwazi kuphela. Kodwa masithembeke: ukuba ucela abantu abaphakathi kwakho, ngokugqithiseleyo, i-common denominator kukuba abantu bayayigxotha amahlombe abo kukho konke kwaye banomuvo wokuthi abanako ukwenza nantoni na. Igama elithi "ithemba" nelithi "positivism" ngokukodwa benza kakuhle (jonga apha) kwaye ukuba ungokoqobo ke 'awunayo' okanye 'umcabango weqhinga'. Ilungelo elungileyo: mna andizange ndikhathazeke kakhulu (umzekelo) wam 40e malunga noko kwenzekayo kwezopolitiko okanye kwihlabathi. Ngamanye amaxesha ubambe into ethile, kodwa kungenjalo kubaluleke kakhulu ukuba ufumane imali eninzi, ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ngokuphandle.
Kodwa ngezinye iinkalo ukukhanya kubonakala ukuba sihlaselwa kwaye siqhutyiswa ngakumbi kunye nokubhekiselele kumapolisa ngamanyathelo amancinci. Kuba mna, oko kwakhokelela kwisigqibo sokwenza isenzo. Ndandingakwazi ukuhlala phantsi kubaphathi beentengiso ezihlawuleka kakuhle kwaye ndijonge indlela uhulumeni aqhubeka ngayo ukusingca. Ndiyicinga ukuba wonke umntu makenze okokukhetha. Enyanisweni, ngengozi yokuba ikhaya lakho neendlebe ziya kulahleka, kodwa intolongo eyakungezeyona ingozi ngakumbi kunokungaqiniseki kwexesha elifutshane ngoku uginya. Kutheni ndithetha oko? Kuba kunjalo. Inkululeko eninzi iyasuswa, kukho imithetho emininzi (kunye nabaqhubi nabahloli baloo mithetho) kwaye siya kuhamba kwimeko yamapolisa apho yonke into kunye nayo yonke into ingayilandelwa kwaye ikwahlwaywa xa unika uncedo kwabanye.
Ukuba kamva sineenkampani ngaphandle kwemali kwaye zonke izenzo zilandeleka kwi-blockchain, into engekaze yenzeke yinto ephikisayo kwigumbi lakho lokuchitha. Kungenakwenzeka ukuba abadala bavakashele kunye nokupheka kunye, kuba umhloli angase ahlale egxininisa abathi bahlala kunye kunye nokuba umhlalaphantsi unciphise. Kungenakwenzeka ukuba unike umntu ongenamakhaya igumbi elisendlwini yakho, kuba uhlala kunye kwaye unokunqunyulwa kwi-benefit yakho yokuhlala, inzuzo okanye abaphathi beerhafu bacinga ukuba uhlala kunye kunye njalo. Kwikusasa elikufutshane, ukuba i-DNA yakho ikhona kwi-database kwaye i-smartphone yakho ibhalela yonke inyathelo oyithathayo (i-pedometer sele isithandwa ngabantu abaninzi), ulinganisa impilo yakho kwaye uyazi kakuhle apho ukhona, ngubani ojikelezile , apho ugcina khona kwaye nalapho imali yedijithali igcina ingqalelo yento oyithengayo kwaye uyithengise, awukwazi ukunika ulwazi olunokwenza isonka okanye ipakethe yobisi, ngenxa yoko uhlawuliswa uncedo kumntu omele uxelele kwimeko.
Ukutshitshisa kwakha kwenkqubo yesikweletu sezenhlalakahle, apho ufuna ukuzigcina ungenakuqhelana nabantu abanokuchaphazela iikredithi zakho. Le nkqubo iqhelekile eChina wangena ngokungenasiphelo. E-Netherlands nakwezinye i-EU, oko kuya kuba yincinci. Apha isiqhelo sesivele senziwe ngokusebenzisa uvavanyo kwi-Webshops, i-Airbnb, i-Linkdin kunye nazo zonke iintlobo zeendaba zoluntu. Nangona kunjalo, ukuba i-blockchain ilandelelanisa zonke izenzo zakho kwaye iqinisekisa (ngokusebenzisa i-blockchain) isiseko esingaqinisekanga ukuba zonke ezo zenzo zenziwe ngawe, iphethini yakho yonke yokusebenzisa imali, iphethini yakho yokusetyenziswa kwemali kunye nenethiwekhi yakho yentlalo inokungabonakali ngokucacileyo. Ehlabathini 'kwi-intanethi yezinto' kunye neetayiti ze-DNA ezingenazintambo kuyo yonke into ongayithenga (ukusuka kwenyama, isonka, kwimpahla emhlophe kunye neendawo eziphathekayo) kucaca ngokucacileyo oko nithengayo yonke, nithengise kwaye nidle. Ukuba iikhredithi zakho (ngohlobo lwe-blockchain bitcoin-like-coin) zingasuswa ngokukhawuleza ngurhulumente ngenxa yendlela "yokuziphatha okubi" okanye ukujongana nabantu "abaziphatha kakubi" ngoko uya kukulinda kunye nani ojongene nayo .
Konke oku kuya kuqaliswa isinyathelo ngesinyathelo kwaye ngokuqinisekileyo kuya kuqala ngezinto ezinjengeiphakamileyo eziphezulu okanye eziphantsi kwiinkathalo zempilo kuxhomekeke ekusebenzeni kwakho kokusetyenziswa komsebenzi, kodwa ekugqibeleni nawe unxibelelana nabo. Emva kwakho konke, ukujongana nabantu abaphuza okanye ukutshaya umsi omkhulu kunokukhokelela ekuthinteleleni ukuziphatha kwakho. Ndiyayifaka apha umfanekiso wesigxina oza kuqhubeka uhamba nawo, kodwa oku kufutshane kunokuba ucinga kwaye ngenxa yokuba abantu babonakala beyilwanyana, sijwayele inkqubo yezinto ezithandayo ngokusebenzisa i-media media, nokuba ingaxhunyiwe nge-Instagram , Snapchat kunye nokunikezela 'ukuhlaziywa' kuzo zonke iintlobo zeenkonzo.
Iingongoma zokuqhuba ilayisenisi sele iselomzekelo omhle wendlela inkqubo yesijeziso eya kusebenza ngayo. Kwaye kuninzi okuza kuba umntu uya kuhlwaywa. Siya kuzo zonke iintlobo zeemida, ngokubanzi nangaphezulu kwiinkqubo zemboleko kunye nokulandelelana kwazo zonke iinyathelo. Ngelishwa, uninzi lwabantu abafunda le nto banokuba negalelo kwiinkqubo eziququzelela konke oku okanye ziyinxalenye yabaphathi kunye nabalawuli bemithetho. Abanye khokela isizukulwana esitsha ukufeza le mi sebenzi op ukungaqiniseki nokuthobela. Umntwana kwi-leash mhlawumbi uyisimboli esona sikhulu solu lathiso apho uluntu lithathwe khona. Wonke umntu unomvuzo kwaye sifundisa omnye komnye ukuba kukulungile ukuba ube ngumvuzo. Sihlolisana ukuze sibe se-leash kwaye kukho imikhosi yonke ehambahambayo iyahlwaya abanye abantu ukuba imithetho iphukile. Abanye bakulungele ukuthatha iinqununu eziphezulu okanye izigwebo kwaye yile ndlela umatshini oyile osebenza ngayo ngokukhawuleza ngokukhawuleza, kuba wonke umntu ufuna ukugcina indlu encinane yezilwanyana kunye nezicathulo ezincinci zegadi. Si xelelanaukuba kuluhlu luhle kwaye lukhuselekile'.
Awunaso ixesha lokulinda ukuthatha inyathelo. Kwakungenangqondo ukucinga ukuba urhulumente uya kukugcina. Urhulumente kunye nentando yedemokhrasi yimbangela yenkampu yokubanjwa kwentolongo. Ngethuba nje unceda ukugcina inkqubo, ngokuqinisekileyo unyanzelekile kunye nelifa lakho kubantwana bakho: urhulumente wezopolitiki olawulayo. Ukuba abantwana bakho bakubuza kamva ukuba kutheni ungenzi naluphi na umzamo ukwenza nantoni na malunga nayo: yintoni impendulo yakho? "UAndikwazi ukwenza nantoni mna"? Ewe, unokwenza okuthile, kodwa ukwesaba ukulahlekelwa yimfundiso yakho kwaye ugcinwe kwiingcamango zobuxoki ukuba konke kuya kulungile ukuba ucamngce ngokwaneleyo, wathandaza, wenza iidlogram ze-yoga okanye usebenzise indlela yokomoya ukuze wenze uzive unetyala ukukhawuleza. "UEwe, kodwa ukuba ndizama ukutshintsha into yedwa, ndiza kulahlekelwa ngumsebenzi kwaye omnye umntu uya kuthatha indawo yam kwaye akukho nto iya kutshintshaAkukho mpikiswano. Oko kuxolisa kuwe, kwaye ngokuthatha isimo sengqondo ukuba unomdla wokumisa isimo sengqondo esihlangeneyo. Akathethi malunga nabaculi abaninzi abakuzungezile (jonga ngcaciso).
Ixesha lokusebenza ngoku. Oko kuqala ngokuqaphela into eyenzekayo (apho isiphakamiso somkhusane ngasentla) kwaye ujongene nomba. Kuba ufanele uqale ukuhlala kwizinga elitsha lokuqonda (jonga apha). Ngexesha elifanayo kufuneka usebenzise oko, kuba kungenjalo uya kuhlamba (ingokomoya) indwangu ngaphambi kokuphuma. Funda kwakhona eli nqaku vumelana kwaye ufumene indlela onokuyenza ngayo ikhonkrithi ebomini bakho. Enyanisweni, kufuneka uzibuze into oya kuyenza xa indlu yakho isemlilweni kwaye umlilo uqhubekile: hlalani nilinde umlilo ukuba ungenakulinganiswa, zama ukucima umlilo okanye ulinde kude kube kude Ngaba ubaleke endlwini? Ixesha lokuthatha isenzo!
Ukukwabelana kwamanqaku avela kule sayithi kubonakala kuvinjelwe yi-Facebook. Ngoko xa ulwabelana, abahlobo bakho basayi kubona loo nqaku kwiindaba zabo zokutya. Ixesha ke liza ukuthetha nabantu ngokuzimeleyo nangomntu okanye ukuthumela ama-imeyili ngokucacileyo kubo. Oko kusenokuba isisiqalo sokuqala ukunceda ukuqala utshintsho. Le webhusayithi igcwele amanqaku anokukwenza uqaphele oko kuvela kuwe. Yenza nto kunye nayo kwaye uchithe ukunyaniseka kwakho.
tags: eziziimbalasane, ngqondweni, ukungahambi, ukubetha
2 Julayi 2019 kwi-14: 12
Vumelana ngokupheleleyo neli nqaku, ixesha lokusebenza kulo.
2 Julayi 2019 kwi-15: 49
Kulungile nje .... kodwa uninzi. Awunawo amandla okuqonda nokuqonda yonke. Kungakhathaliseki ukuba ungaphila kaninzi. Akungena. Ngenxa yesinye seziqendu zakho zangaphambili, apho ukhankanya khona uRoald Boom. Ndandibukele ezinye zeevidiyo ze-tube, kwaye uyichaza kakuhle kwifilimu yakhe apho ebona uluntu lonke njengeNPC (ezingabonakali abalinganiswa). Eyona nto ingumxholo wamhlanje we-Allegory of Pllo's Allegory.
2 Julayi 2019 kwi-17: 04
Uthetha ukuba ufunda eli nqaku:
2 Julayi 2019 kwi-17: 44
Ndiyifunde ngokwenene loo nto .... Ndicinga ukuba ingqondo ayiyena kuphela isizathu. Oku ngakumbi kumlinganiselo womntu osemdeni waseDatshi okanye nawuphi na ubuzwe. Awukwazi ukubenza baqinisekise ngazo nayiphi na ingxabano, ukuqiniswa njl. Ukukhanya kuphezu kodwa akukho mntu uhlala ekhaya.
2 Julayi 2019 kwi-22: 40
3 Julayi 2019 kwi-08: 58
Ngokuqinisekileyo ibali elingaqhelekanga, ingqwalaselo engaphezulu kweendaba yedwa isele isolisa. Kukho izinto ezininzi ezilahlekileyo endicinga ukuba ziyinyani, kodwa ingqwalaselo yeendaba isoloko igcinwe kakhulu, ngamanye amaxesha iphephandaba lendawo kwaye kunjalo. Ndicinga ukuba amaphephandaba acacisa ngokubhekiselele kwizinto eziphathekayo kwaye ukuba le nto ingaphezu kwengqwalasela yesiqhelo ke ityala okanye mhlawumbi ibali eliyinyaniso.
3 Julayi 2019 kwi-08: 49
Kwimifanekiso ye-movie Indoda yokubhubhisa esuka kwi-1993 unokubona kakuhle apho sihamba khona, elidlulileyo elide lokuba ndiyibonayo ifilimu kwaye sele ndithi ihlabathi liya khona.
Ngoku ku-2019 sibona ukuba oku kuyinyaniso.
Umgaqo wokutshaya ngumzekelo omhle, ke ukutshiza ukutya kokutya. Ukusetyenziswa kotywala kuya kutshatyalaliswa ngokukhawuleza njalo njalo. Singakanani na kumgama ococekileyo owubonayo kwifilimu ukuba i-3D ishicilelwe njengesiphumo sokusasa ekuseni?
Kule filimu wambona nendlela owahlawuliswa ngayo ngokufunga okanye ukuthuka, okwenzeka kumshicileli ukusuka eludongeni. Ngoku inkqubo enjalo isebenza eChina kwaye esikhundleni somshicileli intlawulo ithunyelwe ngeSMS.
Okwangoku kuphuhliso oluxhalabisa kakhulu kodwa ezininzi ezingabalulekanga, ngaba uyazazi ezo ntsapho? umsebenzi omhle, indlu ebiza, ungabhema, ungaphuzi utywala uze udle ukutya kokutya. Abantwana bayagonywa nantoni na yonke into kwaye ngenxa yoko i-allergen kuyo nayiphi na into.
Idlalwa ngokupheleleyo ngamajelo.
Kubonakala ngathi abantu abasayi kuvunyelwa kwixesha elizayo, ngaphandle kweyinyaniso ngokwenene.
3 Julayi 2019 kwi-10: 06
Madurodam, ihlabathi elitsha elinenkalipho. Akukho bantu abahlala apha kodwa iidrobho. Nabo "iimvakalelo" zabo zijonge. Kwaye ukukwazi ukucinga ngaloo nto
iibhobhothi kungekho ngokuthe ngqo ngenxa yeso simo.
Yonke into i-gravy iphume. Yonke inkohliso, yonke into iqondiswe apha.
Injongo yale nto ekugqibeleni amandla, amandla apheleleyo
kunye nangomdla wolawulo lwamakhwenkwe ebhaliweyo. Abo bafana bacinga ukuba bangalokothi baphele amandla abo kwakhona, kungekhona nangendlela eqhelekileyo.
Kuza kufika ixesha apho nangona ukhula luvunyelwe ukuba lukhula, ukuba lukhula. Kuba a makhwenkwe yombhalo ukhula luwuphawu lokuvukela, ukuvukela kwinkqubo yabakhwenkwe besikripthi.
Siep wabhala wathi:
4 Julayi 2019 kwi-20: 02
Ngoku ndiyazi izibhengezo ezithintela ukuba ndithathe inyathelo. Inkulu kakhulu mhlawumbi isifo sikaMartin .... Kwaye xa ndifunda iimpendulo, ubuncinane amagama, baninzi abangakhange baqaphele (okwangoku) bazama ukuphendula ngokuvulekile, kwaye anditsho ukuba nje ngcikivo, ndingumnye wabo!
Ngaba awukwazi ukuba undixelele oko kufuneke kwenzeke ngaphambi kokuba ndithathe isinyathelo ...
5 Julayi 2019 kwi-11: 34
Cinga nje ukuba iinkonzo zabafana abasuka kwisikripthi bayazi ukuba ngubani uSiep kunye nezinye iiposta ezikule ndawo.
Inyaniso yokuba kukho abaphendulayo abanokuthi bayotya ukubeka iingongoma ezibalulekileyo kwiziko likaMartin nje kuthetha ukuba aba baphendulayo bayazi kakuhle ukuba siphila kulawulo lokunyanzelisa, ukunyanzelisa, ukunyanzelisa ubuqili.
Uqikelele ngokwaneleyo ukuba lube lukhulu!
5 Julayi 2019 kwi-18: 49
Kwimi, ndixhalabele ngakumbi kwimeko yam, ndicinga ukuba akukho bantu abane-ajenda ephindwe kabini kunokuba 'iinkonzo'. Kwaye nangona baziyo ukuba ngubani oza kuza kubona nokuphendula apha, kuba (ngoku) engaziwa kwindawo yakho.
« Ulwaphulo-mthetho li-alibi elifanelekileyo lokupheliswa kwemali kunye nokulawula ngokupheleleyo abantu
Abantu bangathetha njani 'ukuqonda' kwaye ngexesha elifanayo banceda ukugcina inkqubo? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 15.866.690